अँध्यारोमा मोबाइल चलाउनु खतरनाक !!! – MEDIA DARPAN
अँध्यारोमा मोबाइल चलाउनु खतरनाक !!!
मिडिया दर्पण	 प्रकाशित ४ भाद्र २०७५, सोमबार १४:२३
रातको समयमा स्मार्टफोन तथा कम्प्युटर चलाइरहँदा तपाइँले महसुस गर्नुभएकै होला ती ग्याजेटको स्क्रिनबाट निलो प्रकाश निस्किने कुरा ।
भलै हामीहरु यस्तो निलो प्रकाशसँग अभ्यस्त भैरहेका छौँ । तर त्यो प्रकाश हाम्रो स्वास्थ्य, खासगरी आँखाको लागि निकै हानिकारक छ भन्ने कुराको हेक्का राखिरहेका छैनौँ ।
तपाईलाई एलर्जीको समस्या छ?
इतिहासकै क्रूर तानाशाह